Isticmaalayaashu waxay beddelaan iPhone-ka sii yaraanaya iyo ka sii yaraanaya, ma waxaa ugu wacan qiimaha? | Wararka IPhone
Isticmaalayaashu waxay beddelaan iPhone-ka marba marka ka sii hooseysa, ma waxaa ugu wacan qiimaha?
Beddelida iPhone way adag tahay, badiyaa waxaan u samaynaa raaxo, munaasabadaha kale maxaa yeelay waa jabtay oo damaanad kama bixin ... Xaqiiqdu waxay tahay in suuqa taleefannada gacanta ee casriga ahi uu barafoobay, ee uusan ahayn sida qiimaha iPhone, taasi ma joojinayso kor u kaca sanadba sanadka ka dambeeya. Daraasad dhowaan soo baxday ayaa shaaca ka qaaday in dadka isticmaala iOS ay sii fidinayaan iphone-kooda wakhti aad u badan, dadka isticmaala taleefanada guud ahaan waxbadan kama badalaan taleefannada gacanta. Tan waxaa u sababi kara hal-abuurnimo la'aan, ka warqabka isticmaalaha ee keydinta, ama xitaa labadaba isla waqtigaas.
Kooxda Istaraatiijiyada Istaraatiijiyada ayaa sameysay warbixin ah in inta badan iphone-yada ay shaqeynayaan ugu yaraan 18 bilood ka hor inta aan lagu badalin nooc cusub. Marka la barbardhigo, boosteejooyinka Samsung badanaa waxay socdaan qiyaastii 16,5 bilood. 7% dadka isticmaala ee la wareystay waxay qorsheynayaan inay ku qarashgareeyaan ilaa 1.000 doolar (daraasada waxaa lagu sameeyay Mareykanka Mareykanka) iibsashada soo socota ee taleefanka gacanta, taas oo ah, dhamaadka-sare ee qalabkan ayaa sii kordheysa qatar ugu jira aan matalin.
Macaamiisha ayaa leh aragti ah in hal-abuurnimada la joojinayo.
Sidoo kale waa in lagu xisaabtamo in 20% dadka isticmaala ay awoodaan inay ilaashadaan isla terminaalka ilaa 33 bilood. Way cadahay in heerarka dhexdhexaadka ah iyo heerarka sare aysan hadda sidii hore u dhicin, iyo in hal-abuurnimadu aysan u muuqan mid ku filan inay soo jiitaan macaamilka takhasuska yar. Anigu waxaan ahay tusaalaha koowaad, maxaa yeelay iPhone-kayga X wuxuu kusocdaa wadadii uu u noqon lahaa laba sano, 24 bilood oo la isticmaalo, xoogaa ka sarreeya celceliska tirakoobka, Immisa jeer ayaad badashaa iPhone-kaaga? Noo soo sheeg sanduuqa faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Isticmaalayaashu waxay beddelaan iPhone-ka marba marka ka sii hooseysa, ma waxaa ugu wacan qiimaha?
Way cadahay in maanta qalabku aad u fiican yahay sanad walbana in yar lagu horumarin karo. Kaamirad ka fiican, processor fiican… Waxay umuuqataa in sanadwalba ay tahay inaan helno wax cusub oo naga dhigaya hadalka la'aan, laakiin giraangirta mar horaba waa la alifay. Ma dhahayo wax walba horey ayaa loo alifay laakiin way sii adkaanaysaa in la abuuro wax kadis ah (laabashada Samsung iyo Huawei)
Barnaamijka kumbuyuutarka waxaa ku jira hal-abuur laakiin laguma arko isha qaawan.
Iyadoo lagu xisaabtamayo qiimaha safafka dhaadheer iyo in isbedelada heerka qalabka ee sanad ilaa sanadka soo socda aysan wax badan ku kala duwaneyn, way adag tahay in isticmaale si uu u arko qiil u sameynta banaanka in loo sameeyo qaab cusub. Waxay noqon doontaa mid aan faa'iido lahayn in lagu qasbo in la beddelo moobiil (kaas oo waqtigaas ku kacaya in ka badan kun euro) dhowr sano ka dib maxaa yeelay waxqabadkiisu wuu liitaa.
Waxaan iibsaday iPhone X maalintii la bilaabay. In ka badan € 1200 ayaan ku qaatay. Maanta waxay u shaqeysaa si qumman, sida maalinta koowaad (haddii kale ma iibsan lahaa iPhone markale). Markaad aragto xanta ku saabsan iPhone-ka cusub ee ay sii deynayaan, ma jiraan wax dhiirrigelin u ah in la beddelo. Ma dhahayo ma jecli inaan haysto laakiin… malaha sanadka dambe hadii uu keeno 5G….
Waxyaabaha cusub ee la soo saaray, dadka Apple badankood waxay iibsadaan iPhone maxaa yeelay haysashada iphone waa moodada, maxaa yeelay haysashada iphone waxay siinaysaa sharaf ama xaalad gaar ah, qof walba ma fiirinayo waxa u socda A12 ama kamaraddu waxay leedahay hal-abuurnimo X Dadkaas isticmaal astaamahan waa kuwa laga tirada badan yahay. Qof kasta oo aan la tashado wuxuu ii sheegaa in qiimuhu yahay dhibic 1. Xaaskeygu waxay leedahay 6S Plus oo runta ayaa ah, haddii aad iska saarto dahaarka waa taleefan gacmeed cusub, xitaa malaha astaamo adeegsi, way u adeegsaneysay 5 sano, cajiib ah, waa Iska jir, markaad aragtay qiimayaasha kuwii soo baxay sanadkii hore, waxaad dhahday maya, waayo? Hagaag, maxaad kaliya u isticmaashaa whatsapp, fb, ig, Zafari, iyo 2 kulan, laakiin waxba, mararka qaarkood sawirro, ma waxaad dooneysaa awood aad u badan oo loogu talagalay 4taas shey ee mobile kasta uu ku siiyo? Midda kale, dad aad iyo aad u tiro badan ayaa iibsanaya taleefannada gacanta ee la isticmaalay, waxaan haystay 4S, waxaan aaday SE, waxaan aaday 7 iyo wixii la mid ah, dadku si fudud ayey u iibiyaan midka la isticmaalay oo waxay iibsadaan kan xiga (taageerada weli way sii jirtaa xitaa waqti yar ), kan ugu guuleysta maxaa yeelay wuxuu ka boodayaa 2 tifaftir.
Ha iloobin inaad faallo ka bixiso, waxaan ka imid Latin Amerika, hawlwadeenadu kuma caawiyaan inay helaan terminaalka sidoo kale, waa inaad heshaa qandaraas aad u sarreeya, oo weliba sidaas oo ay tahay mobilka lacag aad u tiro badan baa ku baxay, sidee bay noqonaysaa inaan anigu hel qorshe xog sare oo aniga iyo terminal-ka aan ku fadhiyo ku dhowaad kun doolar? (Waa maxay sicir-dhimista lagu helayo qandaraas sidan oo kale ah? Faa'iidada keliya ayaa ah maalgelinta iyo qandaraaska sare oo lagu daray maalgelinta = lacag aad u badan.
Waxaan xasuustaa sanadkii la soo dhaafay markii XS, XS Max, XR soo baxeen, waxaan u aaday hawl wade (dabcan) si aan u arko qiimaha waxaanan eegay sicirka shirkad kale (Orange) oo leh heshiis joogto ah isla markaana waad rumaysan kartaa taas Orange ayaa 200 dollar ka jaban kan kale? isla terminal… .. cajiib ah
Waxaan u maleynayaa inay asal ahaan nagaftamayaan. Anigu waxaan ahaa isticmaale Apple illaa 20 sano, waxaan haystay dhammaan noocyada qalabka oo ay ku jiraan dhowr iphone. Hadda waxaan isticmaalaa 6s oo si fiican u shaqeeya. Aniguna si daacad ah uma qorsheynayo inaan beddelo inta ay shaqeyneyso. Waxaan u arkaa inay kaftan tahay sida Apple kor ugu qaado qiimaha iPhone-ka sannad kasta. Waxaa intaa dheer, sida ugu dhakhsaha badan ee aan u iibsado iPhone cusub, ma doonayo inaan iibsado tusaalihii ugu dambeeyay, waxaan soo iibsan doonaa qaab duug ah oo si fiican u shaqeyn doona. Kharash garaynta € 1200 ee taleefanka sanad walba waxay iila muuqataa ceeb dhab ah.
Dabcan sababta aysan isticmaaleyaashu had iyo jeer taleefanka u badalin waa QIIMAHA.
Sii wad oo xumbada aad abuureyso ayaa ku qarxi doonta wejigaaga hunguriga badan.
Ku jawaab Elric
hal-abuurnimo ay dhahaan, in celcelis ahaan isticmaalaha iyo in badankood aysan wax macno ah bixin, dabcan waa qiimaha oo waxay ku dareen in suuqa gacan-labaad horeyba sifiican loogu arkay (sida ay kor ku yiraahdaan, iPhone waa iPhone) wax kayar oo ay bixiyaan Kharashyada noocan oo kale ah, hadda Tusaale ahaan waxaad ka helaysaa xs oo aad u yar isticmaalka 650-700 yuuro, ficil ahaan cusub iyo bisha xigta waxay soo ridi doontaa wax kale oo 50-60 ah
Anigu waan beddelayaa oo waligay uma aan dayin moodelkii ugu dambeeyay
IoMcI CuRTis dijo
Waxaan la joogey 6s Plus-keyga muddo 41 bilood ah oo la tiriyey, illaa iyo inta ay ka sii shaqeyneyso uma maleynayo inaan iibsado mid kale, mana u jeedo iPhone kale. Runtu waxay tahay in qiimaha ay qaadayaan boosteejooyinka cusub ee Apple ay tahay naafonimada ugu weyn ee aan ka heli karno in iyadoo ay weheliso la'aanta kobcinta tiknoolajiyada, soo iibsiga iPhone cusub ayaa dhawaanahan ahaa mid guuleysanayay. Kama hadli karno 5G tusaale ahaan iyo in Apple uu damacsan yahay inuu naga iibiyo terminaal uu ku soo bandhigi doono wax ka yar hal bil iyada oo aan la hirgelin oo ay kuu sheegaan inay noqon doonaan kan xiga. Taasi xitaa waxay kaa dhigeysaa inaad la yaabto haddii cusbooneysiinta sanadkan ay u qalanto iyo in kale. Qiimo badan oo caadi ah ayaa siin doona qaab kale xaaladdan.
Jawaab IoMcI CuRTis
OtterBox Waxay Soo Bandhigeysaa Meel Lagu Xidho Xarigga Xadhigga Aan Xirneyn Ee iPhone
iCloud Web cusboonaysiinta iyo dib u qaabaynta barnaamijka Xusuusinta